February 21, 2021 Xuseen 10
Puntlandtimes (DJabuuti)-Dowladda Jabuuti iyo Somaliland ayaa kala saxeexday heshiis dhanka amniga ah gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero aragagixisada iyo isku gudbinta dambiilayaasha maadama ay xudduud wadaagaan.
Labada dhinac ayaa waxxaa si rasmi ah heshiiskaan muhiimka ah ugu kala saxeexay taliyeyaasha booliska Somaliland iyo Jabuuti, waxaana goob joog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh.
Dowladda Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya kajooga Ciidamo farabadan, oo ku howlgalla Magaca AMISOM, kuwaas oo ku sugan inta badan degmoyinka Gobolka Hiiraan ee Maamulka Hir-Shabeelle.
Jabuuti ayaa dhowr jeer hehsiisyo isugu jira, Ganacsi iyo Amni waxaa ay la saxiixatay Soomaaliland, iyaga oo sidoo kale casuumay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, inkastoo horay DFS xiriirka u jartay dalalka Kenya kujirto oo Somaliland macaamil toos ah la sameeyey.
Maamulka iiidorka iyo close waraabe ee Djibouti awalba xirir ganacsi wey la haayen wax cusub ma aha.
Xaasidnimadu waa Cayb
ألهما احمينا من شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد
Somaliland is a great region,it is also a part of Somali country.
Somaliland il iyo cawri ilaahey kaa magan gali
Adba haddaadan is rabin yaa ku raba
Somaliland maaha wax la aqbalikaraa ha imaadeen Sool Iyo Sanaag
Jabuuti ma dalba wa hal magaalo o hal nin o ana caqli badneyn u xirawa garawe o kaleto.
Farmaajo 4 More Years says:
Cumar Gheele qabiilkiis Ciise qabiil yar waaye,toban kun ma gaarayan saan maqlay.
Jabuuti waa ka cabsoonaysaa Somalia, fiiri Cumar Gheele weligiis ma aadin magaalada Hargeyso maxa yeelay waa baqaya waa ogyahay in dowlada federaalka Somalia aysan uu dulqaadan doonin, Jabuuti maamul goboleed ka tirsan Somalia waaye si qaldan ayaa 1977 ku goosteen.
Shacabka Soomaaliyeed gafka Cumar Gheele iyo tageerada Kenya maanta ka dambayso ma uu dulqàadan doonto, shacbiga Jabuuti maamul goboleed ka tirsan Somalia ayaa rabaan waana siinaynaa dhowaan.
Djibouti: waa dal leh Dowlad,dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ah,abaal wayn bay u hayaan,shacabka iyo madaxwaynaha dowlada Djibouti,guul,nabad iyo horumar baano u rajayn.
Soomaaliya waa iso iman,wixii u soo kordha,meel ja mud ah Soomaaliya sida sylac,Hargaysa,Berbera,Bossaso,Beletwayne,Mogadisho,Baydhabo,
Brava,Kismaayo waa guul iyo kheyr.
Soomaaliya guul nabad.
Boon Ilkoyar Marexaan waxa tiri:
“anaga saxiibkeen Iritiriya waaye, jabuuti cadowgen waaye”